Iyo yechokwadi nyaya yeThe Little Mermaid, iyo ngano yaHans Christian Andersen | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Fantasy, Type, Nyaya
Mudiki Mermaid chaiye.
Iyi ngano yakaburitswa muna 1837 muCopenhagen. Munyori waro aive Hans Cristian Andersen, ane mukurumbira munguva yake yenyaya dzevana vake, pakati padzo, kuwedzera kune Mermaid Mudiki, Iyo Yakashata Dhadha, Iyo Chando Mambokadzi nevamwe vazhinji.
Mutambo unotipa isu nenyaya yemusikana mudiki uyo anodanana nemunhu uye parwendo rwake anoenda nemumamiriro asingagumi. Iyo nyaya, iyo pachayo, iri kure nezvavanotipa isu mumamuvhi uye inosvika pakuve nemitambo iyo Disney yaisazotya kuratidza padariro kunyangwe muzviroto. Parizvino vateveri ve Hans Cristian anogona kuwana anokosha matsva edhisheni enhau dzake.
1 Chidiki chemunyori
2.1 Chiito chekuwira murudo
2.2 Kurwadziwa kwekufamba
2.3 Rufu netariro
Hans akazvarwa musi waApril 2, 1805 muguta reOdensa muDenmark. Mwanakomana mugadziri weshangu, akadzidza hunyanzvi hwakawanda nyore, asi haana kuzvisimbisa mune chero chinhu. Pazera remakore gumi nemana, akatiza nemari shoma kwazvo kuguta guru renyika yake.
Kutenda tarenda rake mukunyora, vamwe vane mukurumbira vatambi venguva vakasarudza kutora fundo yavo. Andersen akanzwa kuti mamiriro ake ehurombo raive dombo munzira yake saka akafungidzira kuti ndiye akavanda uye akarasika mwanakomana wemari yakawanda ishe.
Hans Cristian Andersen aive mudetembi uye mupfupi munyori wenyaya, akaisawo mamwe mabhuku ekufambisa akadai Bhazari nyanduri, iro raive bhuku rake rakarebesa. Nekudaro, basa rake semutauri wenyaya ndiro rainyanya kufadza, akanyora fungidziro yenyaya zana nemakumi masere nesere.
Dzakawanda dzenyaya idzi dzakava dzechinyakare uye nanhasi dzichiri kuverengerwa kune vadiki. Kusiyana nenhau zhinji dzenguva izere nerima nerufu, ngano dzaAndersen dzaimbove netariro magumo, neimwe nzira kana imwe.
Inotaurira nyaya yemusikana wechidiki uyo kana achinge asvitsa makore gumi nemashanu anotenderwa kukwira kumusoro kunoona vanhu. Asati akwira, baba vake vanomuyeuchidza kuti anokwanisa chete kucherechedza, nekuti haana mweya wekusingaperi sowo wevanhu.
Chiito chekuwira murudo
Paanozokwira kumusoro kunoona zvese zviri pamusoro, dutu rinonyudza chikepe chemuchinda akanaka, chaanonunura. uye inoisiya pamahombekombe kana yaona kuti yakachengeteka. Anodonha achipenga murudo uye anoshanyira muroyi wegomba rakadzika kuti akumbire makumbo.
Quote naHans Chistian Andersen.
Iyo n'anga inomuudza kuti mashiripiti anogona kukandwa kuchinjana izwi rake rakanaka, uye kuti kana muchinda akasadanana naye ndokuroora mumwe munhu, anofa. mambakwedza mushure memuchato uchishanduka kuita furo. Anomuyambira zvakare kuti nhanho yega yega yaanotora nemakumbo ake matsva ichave inorwadza semamirioni eminondo achicheka mukati meganda rake kusvika radeuka.
Iyo diki mermaid inokambaira kuenda kumahombekombe uye inotora yakasarudzika chinzvimbo. Muchinda anomuwana uye afunga kumuchengeta, asi zvakare anoreurura kuti akadanana nemumwe Musikana, uya waanofunga akamununura kubva mukuparara kwechikepe. Pakupedzisira, iye anokwanisa kumuroora, ane shungu mermaid anosarudza kumirira kufa kwake mambakwedza.
Vanun'una vake vanoshanyira iye Muroyi nechinangwa chekuchengetedza munin'ina wavo., uye mukutsinhana nemurume wavo murefu anovapa banga rekuti iro Mermaid Mudiki anofanira kushandisa kuuraya muchinda.
Anopinda muchivande mukamuri yemuchato, uye achimuona akarara nerunyararo afunga kusamuuraya, sezvo achiri kumuda. Saka anozvikanda mugungwa, agadzirira kuita furo, asi ipapo mhepo fairies inomukoka kuti ave mumwe wavo, kuitira kuti mushure memakore mazana matatu vachiitira vanhu zvakanaka vagowana mweya wekusingaperi.
Kufanana nemamwe akawanda echinyakare, Disney akatora huwandu hwenyaya yeiyi yekare nyaya yevana ndokuipa iyo nyowani nyowani. iyo yaakaona seinokodzera veruzhinji vanhasi.
Zvisinei, huwandu hwe shanduko Disney yakaitwa kune yekutanga ngano inoita kuti iyo bhaisikopo ive nyaya yakatosiyana. Kufananidza Iyo Danish Diki Mermaid neAmerican Ariel inenge isina kukwana zvachose, nguva dzadzo, nyaya uye zvimwe zvinhu zvinoita kuti nyaya yega yega ive yakasarudzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Iyo chaiyo mermaid
Ini ndinonamira nenyaya yekutanga
Pindura kuna Cristopher